Wararka - Suuqa Loogu Talagalay Plexiglass Waa Soo Kordhayaa
Plexiglass waa shey kulul si lama filaan ah, maxaa yeelay baahida loo qabo kala fogaanshaha bulshada iyo ilaalinta ayaa korortay. Taasi waxaa loola jeedaa kor u kac weyn oo ganacsi oo loogu talagalay alaab-qeybiye loo yaqaan 'acrylic plexiglass'.
Degdega wicitaanada ayaa bilaabmay bartamihii bishii maarso. Maaddaama cudurka faafa ee coronavirus uu si dhakhso leh ugu faafayo adduunka oo dhan, isbitaallada ayaa baahi weyn u qabay gaashaanka wajiga si loo ilaaliyo, aagagga dadweynaha waxay u baahan yihiin kala fogeynta bulshada caqabadaha ilaalinta ama kala qaybsanaanta ilaalinta. Markaa suuqii wuxuu u weecday soo saaraha xaashida qalabka 'thermoplastic sheet', oo ah walxaha sida muraayadaha oo kale ah ee loogu baahan yahay soo saarida gaashaanka wajiga iyo caqabadaha difaaca.
Baahida loo qabo gaashaammada wejiga ayaa caadi ka noqon kara dhammaadka sanadka, laakiin ma hubno in suuqyada sii kordhaya ee caqabadaha acrylic ay hoos u dhici doonaan wakhti kasta. Marka lagu daro baahida loo qabo maqaayadaha, tafaariiqleyda iyo xafiisyada oo si tartiib tartiib ah u furaya, kiisas badan oo adeegsi ah iyo iibsadayaal daneynaya ayaa iska sii badanaya markii ganacsiyo badan ama howlo kulan ay dib u furmayaan, hal muunad sida hoos ku xusan:
Muraayada Acyclic oo lagu rakibay baarlamaanka gobolka Jarmalka- Markii ugu horeysay tan iyo bilowgii dhibaatada coronavirus ee Jarmalka, baarlamaanka North-Rhine Westphalia wuxuu ku kulmay kalfadhi buuxa. Si loo ilaaliyo masaafada bulshada 240 xildhibaan ayaa lagu kala saaray sanaadiiqda quraaradaha.
Maaddaama ay tahay soo saare tayo leh waxyaabaha ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'acrylic (PMMA)' ee Shiinaha, DHUA waxay heshay amarro ku saabsan go'yaal xayndaab acrylic cad ah oo ku xareysnaa. Asal ahaan iibsadayaasha badankood waxay u baahnaayeen go'yaal lagu rakibo inta u dhexeysa qasnajiga iyo macaamiisha, iyo in badan oo ganacsi si dhakhso leh ayey u raaceen. Hada sida wax soosaarka kale ee loo yaqaan 'plexiglass manufactures', DHUA waxay soosaaraysaa carqalado cad oo lagu rakibay inta udhaxeysa waababka iyo miisaska maqaayadaha, kala qaybsanaanta kala go 'si loo kala saaro darawalada rakaabka raacaya iyo "saldhigyada xayiraada" ee loo shaqeeyayaasha si amaan ah u qaataan heerkulka shaqaalaha bilowga shaqada. Alaabtu waxay horeyba ugu sii socdeen tafaariiqleyda, qolalka maxkamadda, tiyaatarada filimada, iskuulada iyo xafiisyada goobaha shaqada.